Day: Mee 17, 2020
Onu ogugu nke oria Corona na Brazil kariri Spain na Italy, na -eme ka o buru mba nke ano n'uwa kacha onu ogugu. Na mba ebe ọnụọgụ ndị kwenyesiri ike ruru 233 puku 142 [More ...]
Ebe ngwụcha ikpeazụ nke ụlọ elu uhie na nke ọcha nke 1915 whiteanakkale Bridge, nke a na-arụ, nke nwere ngọngọ 32, dochiri nnọkọ ndị isi ala nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan jiri nnọkọ vidiyo mee. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ememe Karaismailoğlu akụkọ ihe mere eme na akụrụngwa njem nke Turkey [More ...]
Na ncheta ụbọchị 19 nke Mee nke Atatürk, ụbọchị ndị ntorobịa na egwuregwu, nke bụ afọ nke 1919 nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ Gazi Mustafa Kemal Atatürk na Samsun site na ịpị Samsun na 101 Mee 19, mkpokọta na mpaghara etiti 5 nke Antalya [More ...]
Obodo Ankara emeela ka ndị mmadụ na-agafe agafe agafe n'okporo ụzọ ebe ije ije na-esiri ike ma nchekwa ụmụ amaala dị ize ndụ. Obodo ukwu, nke anaghị ajụ arịrịọ n'aka ụmụ akwụkwọ, ọkachasị mpaghara ebe mahadum dị oke [More ...]
Ndi isi obodo, nke mere ihe n’agbata usoro amachiri n’okpuru iwu coronavirus ma meekwa ka okporo uzo Bursa megoro site na iweta ihe ruru puku puku asaa n ’ala, Atatürk [More ...]
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-emejuputa nnukwu atụmatụ iji nye njem dị mma na nke dị mma n'ọtụtụ ebe nke obodo ahụ. Roadszọ ndị a wuru ewu na-eme ka ọfụma na-agba ọsọ, dị ka ụzọ ọzọ na-ebufe ụmụ amaala. [More ...]
Onye isi oche İBB bụ Ekrem İmamoğlu gara n'ihu nyochaa ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na ntanetị n'oge ngwụcha oge ọ nọrọ n'ụlọ ụlọ obodo niile. İmamoğlu, onye mere nyocha n’ụlọ ọrụ ahụ dị na Eyüpsultan nke ga-ebu “apịtị” nke apịtị Golden Horn, kwuru, “Usoro a bụ [More ...]
Onye isi obodo obodo Izmir nke obodo Tunç Soyer nyochara ọrụ '' Natural Route '' na saịtị ahụ, na-ekpuchi akụkụ ndịda nke Gediz Delta. Onye isi ala Soyer na-akwado ọtụtụ iri nnụnụ, karịsịa flaingos, na ọtụtụ puku ụdị. [More ...]
Mkpokọta “ụgbọ ala” ahụ, nke butere nnukwu mgbasa ozi nke Onye isi ala Erdoğan duziri, bụ isi okwu ọzọ mgbe ọnọdụ nke ọrịa ahụ gasịrị. N'oge a, ọrụ ahụ kwuru na ebugara ala ahụ, nke a sịrị na ọ ga-ewuru,, na Fundlọ Akụ Akụ. [More ...]
Ndị nnọchi anya ndị ọrụ ahia ahụ nke Ngalaba Azụmaahịa na ndị na-ebubata ya gburugburu ụwa na-aga n'ihu na-aga n'ihu na gburugburu ebe a na-emeghị nke ọma n'adaghị ala n'ọnọdụ ụdị ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19). Njem n'okpuru usoro nke Kovid-19 [More ...]
Minista na Omenala na njem Njem Mehmet Nuri Ersoy kwuru na ha na-achọ ime ka mpaghara a bụrụ akara ngosi ndị njem na -ele anya na Çeşme Project. Minista Mehmet Nuri Ersoy, n'etiti atụmatụ nke Aegean Tourism Plan, [More ...]
Onye Omenala na Omenala Mehmet Nuri Ersoy kwuru, "Ọ bụrụ na onweghị ihe dị njọ, nwee nchekwube ga-ebido na njem ndị njem nke ụlọ dịka May 28." kwuru. Minister Ersoy, ụdị ọhụụ na mgbasa ozi NTV na-ebi ndụ na Bodrum district nke Muğla [More ...]
Ndepụta Akwụkwọ Akwukwo Nso nke Umuaka maka Ndi Okenye Nke Okenye Nke Kwuru
Dịka Ministrị nke Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ, ebipụtawo akwụkwọ 0 nke ụmụaka nwere mmasị dị mma maka ụmụaka ruru ogo 6-427 na weebụsaịtị webụsaịtị. 0-6 afọ na ụlọ ọrụ ejikọtara na Ozi anyị [More ...]
Ekrem İmamoğlu mụrụ na 1970 na Trabzon. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Trabzon, ọ gụsịrị akwụkwọ na Ngalaba Azụmaahịa Nchịkwa na Mahadum Istanbul, wee nweta akara ugo mmụta Master ya na Nkụzi na Nchịkwa Ọha na Mahadum Istanbul. Mwube na 1992 [More ...]
TCDD Tasimacilik kwupụtara na ọ ga-amaliteghachi ụgbọ elu High Speed ​​Train (YHT), nke a kwụsịtụrụ n'ihi ntiwapụ nke coronavirus, mgbe ememme ahụ (ọ karịghị 1 June). Dika ozi ọma nke Olcay Aydilek sitere na Habertürk, ya na ntiwapụ nke coronavirus na March. [More ...]
Onye isi ala nke Republic of Turkey General Directorate of State Railways Administration Assistant General Manager na Member onye tụgharịrịara Kara ma nwee mmasị na Iwu Nke 233, Nkeji edemede 8 nke Onye isi ala ọdịda na-enweghị nke 3 na 2 [More ...]
A ga-enwe ụgbọ ala nostalgia na-arụ na İzmir na Istanbul Taksim. Project Nostalgic Tram Project na-erite ndụ. Ebee ka a ga-ewu okporo osisi Nostalgic? Ebee ka ọ ga-agafe? Nostalgic tram, nke bụ akara akara Taksim Istiklal Street na Istanbul, na Izmir [More ...]
Ọ bụ ahịrị kacha jiri rụọ ọrụ nke Adana Mersin State Railways. Oge njem na-ewe ihe dịka nkeji iri anọ na ise. Usoro Adana Mersin Trainum na-amalite n'elekere isii nke isi ụtụtụ, n'agbanyeghị oge ọkọchị na oge udu mmiri 45:6 [More ...]
A mụrụ Recep Tayyip Erdoğan, onye sitere na Rize, na 26th nke February 1954 na Istanbul. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Kasımpaşa Piyale Primary School na 1965 na site na Istanbul Imam Hatip High School na 1973. Site n’inye ulee uda nke nkuzi di iche, Eyüp [More ...]
Panzọ Ọdọ Mmiri Panama
Mgbe emechara uzo ụgbọ okporoko Panama na 1855, ụzọ ụgbọ okporo ígwè jikọtara oke osimiri Atlantic na Pacific na nke izizi. Kmgbọ okporo ígwè dị kilomita 80, ndị njem na-aga n'oké osimiri na mpaghara East na West nke United States [More ...]
Taa na History: 17 May 1972 Railways 991 nde
Taa na History 17 May 1972 Railways 991 enwewo ihe ndekọ nke nde TL.